Ny Fomba Enti-manao Dokambarotra Kyrgyz Tonga Lafatra: Soavaly, Tendrombohitra ary Vehivavy Tsara Tarehy · Global Voices teny Malagasy
Ny Fomba Enti-manao Dokambarotra Kyrgyz Tonga Lafatra: Soavaly, Tendrombohitra ary Vehivavy Tsara Tarehy
Voadika ny 17 Aogositra 2016 19:48 GMT
Vakio amin'ny teny বাংলা, Español, नेपाली, Deutsch, Aymara, Français, Italiano, عربي, English
Dikasary avy amin'ny dokambarotra lava nampiakarina tao amin'ny fantsona Youtube an'i Shoro.
Tsy natao hosotroin'ny olon-drehetra ny zava-pisotro Maksym Shoro vokarin'ilay mpamokatra zava-pisotro malefaka lehibe indrindra any Kyrgyzstana sovietika fahiny, Shoro, saingy ireo tia ny zava-pisotro naotrika somary misy masirasira dia tena tia azy io.
Taorian'ny roapolo taona mihoatra nahombiazana teo amin'ny tsena anatiny — efa saika antitra toy ny firenena Azia Afovoany mihitsy io zava-pisotro io — dia efa azo vidiana eny amin'ny manodidina an'i Kazakhstan sy i Rosia izy io, izay ipetrahana sy iasanà mpifindra monina Kyrgyz an-tapitrisany mahery.
Kanefa notazonin'i Shoro ny toetra maha-mpifindra monina mifandray amin'ny fireneny, tahaka ny nasehon'ny dokambarotra farany an'ilay orinasa. Ity ambany ity ny dokambarotra feno sy ny dikatenin'ny hafatra navoakan'ny orinasa tao amin'ny Facebook mba hanamarihana ny fahatongavany:
Indray andro vao maraina, nisy bandy Kyrgyz iray be herim-po nitaingina ny soavaliny mpiady izay atokisany ho any amin'ny tanin'ahitra teo amin'ny manodidina. Henony fa misy vehivavy tsara tarehy izay nambabo ny fon'ny tompondaka maro nonina teo.
Any Kyrgyzstan, misy lalao tranainy antsoina hoe Kyz Kuumai. Raha vitan'ilay bandy ny misambotra ilay vehivavy, dia horohany ity farany. Raha tsia, dia hotorahin'ilay zazavavy vato izy, ary hitsanga-menatra manoloana ny vahoaka ilay mpitaingina.
Nefa, raha ohatra ka metimety amin'ilay vehivavy ilay bandy, dia afaka milefitra mangingina izy [ahenan'ilay vehivavy ny hafainganam-pandehany ao anatin'ny dokambarotra ary nanontany ilay mpitaingina: ”Ry zazalahy, vao voalohany nitaingenanao soavaly angaha androany?”]. Rehefa dinihina, toy ny notenenin'ireo razambentsika foana hoe : ”aza mangataka soavaly faingana, mangataha dia ieren-doza’.
Maksym Shoro — ilay zava-pisotron'ireo mpifindra monina.